Banyere Anyị - Xinle Xinyue Plastic Co., Ltd.
Xinle Xinyue Plastic Co., Ltd. emi odude ke Dugu, Xinle obio, Shijiazhuang, Hebei ógbè China. Ọ bụ n'etiti abụọ Plastic Center (Dingzhou na Xinle), Ọ bụ ihe dị 10 kilomita site Highway 107, na ala ọnọdụ bụ elu na okporo ụzọ bụ nnọọ adaba.
Companylọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ na-emepụta pvc plastic ngwaahịa site na mmalite 1980s wee wuchaa ala mmepụta akpụkpọ anụ akara na ntinye na 2008. Ugbu a, anyị nwere ihe karịrị ndị ọrụ 200, ọkachasị mmepụta nke ụlọ elu dị elu dị n'etiti na nke dị ala. n'ala akpụkpọ anụ, na-abụghị ileghara doormat ogbo flooring na na, na anyị nwere ọtụtụ obosara mba maka ngwaahịa 2.5-4 mita ka afọ ju ahịa obodo na mba ọzọ.
The ụlọ ọrụ kemgbe ya oruru, ịdabere na àgwà na-adị ndụ aha ịzụlite. Whit ala-nke-na-na-na-na -art technology na akụrụngwa, ụlọ ọrụ dị na plastic isi uru, n'otu oge, na-eji kasị mma ngwaọrụ, jikọtara ya na magburu onwe mmepụta technology anyị mmepụta nke ala na akpụkpọ anụ, na-abụghị kpara akwa akpụkpọ anụ, sponge flooring, dị ọcha ịkwanyere flooring na azụmahịa flooring rere isi ụlọ obodo na mba ọzọ dị ka Mid-Asia, South ọwụwa anyanwụ Asia, South Africa na East Europe na na. Ọmarịcha ngwaahịa dị mma na ọrụ ire ere arụzuola aha ọma na okwu-ọnwa.
Re 4 na mmepụta akara, anyị na-ewu 4 mita n'obosara mmepụta akara na 2012, nke a bụ nke mbụ mmepụta akara maka 4 mita flooring, gbara akwụkwọ elu oghere nke China flooring ubi na oge, na n'ihi na n'oge gara aga 8 afọ, anyị chịkọbara ndị ọgaranya ahụmahụ na-amị site na ọmụmụ ihe anyị na nyocha na njedebe. anyị nwetara ọtụtụ iwu site na ụwa na anụ ụlọ ahịa. Ugbo ala dị ike ma mara mma maka agba ya na njirimara ya. Daalụ nke ukwuu maka enyemaka nke ndị enyi anyị ochie ma nwee olile anya na ndị enyi ọhụrụ anyị lebara anya maka ime ụlọ anyị a.
Pvc Kapetị, Ala Kapetị Roll, Pvc Ogbo flooring, Pet Ogbo ulo, Ala, Anu anu ogu anu ulo Pet,